ယခင်နှစ်ကထက် နှမ်းမျိုးစေ့ဈေး တက်၊ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မိုးမရွာသောကြောင့် တောင်သူများ အ?? - Yangon Media Group
ယခင်နှစ်ကထက် နှမ်းမျိုးစေ့ဈေး တက်၊ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မိုးမရွာသောကြောင့် တောင်သူများ အ??
မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီးအောင်လံမြို့နယ်၌ ယခင်နှစ် ကထက် နှမ်းမျိုးစေ့ဈေးတက်နေ ကာစိုက်ပျိုးချိန်တွင် မိုးမရွာသော ကြောင့် တောင်သူများအခက်အခဲ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ ”နှမ်းသီးနှံမျိုးစေ့က အရင်နှစ် ကထက် ယခုနှစ်ကဈေးပိုမြင့်နေပါ တယ်။ အခုထိလည်းမိုးကမရွာ တော့တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုးရာသီ ကနောက်ကျနေပါပြီ။ ယာခင်းထဲ ထယ်ရေးပြင်ထားပေမယ့် စိုက်ပျိုး ဖို့ အခက်တွေ့နေကြပါတယ်”ဟု အောင်လံမြို့နယ် စမ်းကလေး ကျေးရွာ ကျောင်းစုမှ တောင်သူ ကိုသန်းဆွေက ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာများ၏ ယာခင်းတွင်တောင် သူများမှာ ထယ်ရေးပြင်ဆင်ထား သော်လည်း မိုးမှာယနေ့ထိမရွာ သေးသဖြင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်အခက် တွေ့နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”နှမ်းမျိုးစေ့ကအခုနှစ်ကအ ရင်ကထက်ဈေးပိုတယ်။ နှမ်းစမုံ နက်တစ်အိတ်ကိုကျပ် ၂၇ဝဝဝဝ ဈေးရှိတယ်။ အဲဒီလိုဈေးတက်နေ တာအခုထိ တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကဝယ် လိုအားမြင့်တက်နေတာရယ်၊ အ ရင်နှစ်ကနှမ်းအထွက်ကလျော့ကျ ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ တောင်သူတွေ အနေနဲ့ဒီနှမ်းစမုံနက်ကို GAP နည်းနဲ့ စိုက်ပျိုးပါကနှမ်းအရည်အ သွေးရယ်၊ အက်ဆစ်ပါဝင်မှုမရှိရင် ဈေးပိုရမှာ”ဟု မြို့နယ်ကုန်သည် ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင် မိုးက ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့တွင် ယခင်နှစ် က နှမ်းစမုံနက်မျိုးစေ့ ၄၅ ပိဿာ တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၁၅ဝဝဝဝသာ ရှိခဲ့ရာယခုအခါ တစ်အိတ်ကျပ် ၂၇ဝဝဝဝဈေးဖြစ်နေသည်။ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာများတွင် နှမ်းစမုံနက်ကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြရာ GAP နည်းပညာဖြင့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်ကကျေး ရွာခြောက်ရွာတွင် ဧက၁၄ဝဝစိုက် ပျိုးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာ ၁ဝ ရွာ၌ဧက ၄၈ဝဝစိုက်ပျိုးရန်စီ စဉ်ထားကြောင်း မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
"ကျွန်တော် Raggae ကို ဘဝတစ်ခုလို နေထိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် လူတွေ Raggae ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုပဲ မြင်ကြတ?